Tarkaanfiin hammeenyaa Tigray keessatti tahaa jiru akkamitti dhageettii guddaa addunyaa irratti argachuu danda’e? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsTarkaanfiin hammeenyaa Tigray keessatti tahaa jiru akkamitti dhageettii guddaa addunyaa irratti argachuu danda’e?
Tarkaanfiin hammeenyaa Tigray keessatti tahaa jiru akkamitti dhageettii guddaa addunyaa irratti argachuu danda’e? Sababoota gurguddoo armaan gadii wal yaadachiisuun gaarii.
1. Lolli TPLF irratti baname lola ummata Tigraay akka ummataatti irratti xiyyeeffate tahuun dafee mallattoolee heddu waliin mul’ate, ummata Tigaayis keessaa fi alatti wal faana hiriirse, xiiqesse.
2. Waraanni gama lachuu hidhatee fuulaa fuulaatti wal loluun hawata miidiyaa addunyaa dafee argate.
3. Lola kana keessatti hirmaachuun biyya ollaa (Eertiraa) dhimmicha dhimma lola daangaa cehe (transborder conflict) tahuu isaa addunyaatti agarsiise.
4. Dhaabni Tigraay, TPLF waggaa 27f aangoo ol’aanaa mootummaa giddu galaa Itoophiyaarra waan tureef har’a mootummaa giddu galaa waliin lola seenuun qalbii ummata addunyaa hawate.
5. Tarkaanfii hammeenyaa ummata siiviilii irratti tahe, keessattuu kan waraana Eertiraa dafanii miidiyaa addunyaatiin gahuu irratti ummanni Tigraay, keessattuu hayyonni isaanii qooda guddaa gumaachan.
6. Dhalattoonni Tigraay kan gaafa mootummaa turan sana bakkoota furtuu furtuu addunyaa qabsiifatanii fi muuxannoon qondaalota addunyaa dhiibbaa uuman qunnamuudhaa gabbifatan yeroo kanatti isaan gargaare.
7. Lakkoofsi ummata Tigraay guutuu biyyattii keessatti xiqqaa (minority) waan tahee fi kana dura aangoorra wayta turan diina heddu horachuun amma isaan rukuchiisuu mala sodaan jedhu dafee addunyaa yaaddeesse.
8. Haleellaan waldaa kiristaanaa Tigraay keessaa irratti tahe gama isaatiin xiyyeeffannoo hawaasa addunyaa harkisuuf qooda guddaa qabaate. Sbaboonni biroonis jiru